Music ka mid yahay dhufto ee ah in tartan weyn. Fanaaniinta music badan oo ku riday dadaal badan si ay u helaan sumcad koobab si ay u noqdaan caan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku heshiin doonaa ila in liiska ma aha joogto ah sida minimalists cusub baraaraan mar kasta. Si kastaba ha ahaatee, qodobkan u shaqeeya kaalinta ugu dambeeyey oo ka mid ah hogaanka toban fanaaniinta ee jeer oo dhan sida baaxadda ay ka qayb qaateen ee ah in dhagaxa, music dalka , oo heesaha raabka iyo noocyo kale oo badan music caanka ah. Fanaaniinta waxa ay leeyihiin tirada ugu badan oo ka mid ah albums music-ugu fiican iibinta in industry ee.
Qaybta 1.Michael Jackson
Qaybta 2.Beerta Beatles
Qaybta 3.Led Zeppelin
Qaybta 5.The Rolling Stones
Qaybta 7.Celine Dion
Qaybta 8.Bob Dylan
In kastoo isna ka hor maray, Michael Jackson qoray music ugu cajiib ah oo u gaar ah in mar uun soo baxay intii uu. Dadka badan dunida u jecel yahay oo uu isugu darey in version dhagaxa. Waxa uu waa in loo gudbiyaa sida King of Pop. Wax walba oo ku saabsan muusiga iyo hanaan cayaartii ahaa kaliya laga qabanin badan.
Waxaad noqon doontaa heshiis ila in kuwanu waxay ahaayeen guutadii ugu cajiibka in weligaa ku noolaa. Waxay music ahaa si madadaalo iyo Yeedha. Waxaa ka mid ah John, George, Paul iyo Ringo. Music ay ku qoray weli waa nool yahay maanta, sida dad badan oo weli ku jira kalgacal iyaga la. Kale oo ka heeso, ay sidoo kale u ciyaaray gitaar iyo alaabtii muusikada oo kale.
3. hoggaamiyo Zeppelin
Kuwaasu waxay ahaayeen fanaaniinta legendry oo magacyadoodu marnaba laga tirtirayaa diiwaanka music. Band ayaa ka koobnaa Roger, Brian, Freddie iyo John. Waxay ka soo jeedeen Britain Weyn oo waxay bilaabeen farshaxanimo ay 1970.With Freddie Mercury isagoo fannaanka hor, waxay ku soo saaray raad weyn ku waqtigooda inta badan aredid weli maanta dad jecel.
Band ayaa la aasaasay 1962, waxay ahaayeen rag Ingiriisi iyo majorly gaar ah oo ku saabsan muusiga dhagaxa. Waxay ahaayeen fanaaniinta music aad u fiican oo ka kooban heeso weyn. Qaar ka mid ah ay ugu fiican waxaa ka mid ah, "Gimme Shelter" iyo "World fardaha." Caalamku weli ceshataa heeso ay maanta. Heeso xaq u muuqataa cusub iyadoo ay jirto in ay soo saaray muddo dheer ka hor.
Elvis ahaa artist music weyn legendry oo vocals ahaayeen qabanin badan. Waxa uu ku takhsasusay ku sifayn Rock ah. Dad badan ayaa si dhab ah u jeclaa hal abuurnimadiisa ee soo saara heeso laxan aad u fiican kuwaas oo ka daran. Haddii aadan weli dhageystay gabayadiisuna, iibsan mid ka mid ah uu albums oo halkaas waa inaad haysataa wax kasta oo la xaqiijiyey midig.
Tani waa divas ah Rock hanad kuwaas oo music u qaadan hal-abuurka weyn. Iyadu waa ka Kanada oo uu soo saaray heeso in ka dhacay suuqa muddo ka dib. Waxay heerkoodu sareeyo ee soo saara heeso qoraal Faransiis. Mid ka mid ah iyada oo heeso fiican yahay "Titanic." Waxay waa qoraa song, actarad marmar iyo sidoo kale dumar ganacsi.
Bob Dylan dhashay America, wuxuu ahaa qoraa song weyn oo artist ah. Waxa uu si deeqsinimo ah ahaa tayo music lyrical iyo gabayo. Inkastoo erayada uu si cad uga ma ay ahaayeen kuwa ugu fiican, waxa uu lahaa hab gaar ah oo iyaga isku eeg inuu abuuro lagu liitaa ah dazing. Waxa uu sheegay inay tababar iyo hagid Beatles ee.
> Resource > Music > POP 8 Artists Music